August Rush (2007) | MM Movie Store
ဒါရိုကျတာ Kirsten Sheridan ရိုကျကူးထားပွီးIMDb Rating 7.5 အထိ ရရှိထားတဲ့ Drama နဲ့ Music ရောစပျထားတဲ့ဇာတျကားကောငျး တဈကားမို့ movie ခဈြသူမြားအတှကျမှတျမှတျရရ တငျပေးလိုကျ ပါတယျ။
2007 ခုနှဈက ထှကျရှိထားပွီး ကွညျ့ရှုသူမြားအဖို့ဇာတျလမျးအစကနေ အဆုံးထိ music ရသကို ခံစားစရေငျးကလေးငယျတဈယောကျရဲ့ မိဘကိုမြှျောလငျ့တောငျ့တမှုနဲ့စိတျအားထကျသနျမှုတှကေို ခံစားမှုအပွညျ့ပေး စှမျးနိုငျတဲ့ဒရမျမာ ဇာတျကားကောငျးတဈကားပါ။
ဒီဇာတျလမျးမှာ ကလေးငယျလေးအီဗနျ ( Freddie Highmore ) ရဲ့ ဂဈတာကို ကြှမျးကငျြစှာတီးခတျပွသမှုကလညျးကြှနျတျောတို့လို music ကို ရူးသှပျသူအဖို့ ရုပျရှငျကွညျ့ရငျးဂီတရသကို မကျမောစှာကွညျ့ရှုနမေိစတေယျ။
အမှတျမထငျတှရှေိ့ခဲ့တဲ့ လူးဝဈ နဲ့ လိုငျလာ တို့ရဲ့ မွငျမွငျခငျြးခဈြသှားတဲ့ အခဈြ . အဲ့ဒီညမှာပဲ ခဈြတငျးနှောခဲ့မှုနဲ့ တဈညလေးတှခေဲ့တဲ့ လူနှဈယောကျရဲ့တဈယောကျအပျေါ တဈယောကျ စှဲစှဲလမျးလမျးခဈြခငျမှုဟာ အရမျးကိုအံ့သွစပွေီး ကံကွမ်မာရဲ့လှညျ့ပွောငျးမှုအောကျမှာပဲ ဖွဈပကျြခဲ့တဲ့ ကွကှေဲဖှယျရာအခဈြဇာတျလမျးဟာ
ဒီဇာတျကားရဲ့ ပွောငျမွောကျတဲ့ အပိုငျးထဲကတဈခကျြလို့လညျးပွောလို့ရပါတယျ။ရှဆေ့ကျပွီးဇာတျလမျးကို မပွောပွဘဲ အခုလိုမြိုး တငျစားပွောဆိုမှုတှဟောကွညျ့ရှုသူမြားအဖို့ ပိုပွီးစိတျဝငျစားမှုရှိ စမှောဖွဈလို့ မိမိကိုယျတိုငျသာ ဇာတျကားကိုကွညျ့ရှုကွပါလို့ပဲ ကြှနျတျော တိုကျတှနျးရငျး movieခဈြသူမြားအတှကျဇာတျကားလေးတငျပေးလိုကျပါပွီ။
ဒါရိုက်တာ Kirsten Sheridan ရိုက်ကူးထားပြီးIMDb Rating 7.5 အထိ ရရှိထားတဲ့ Drama နဲ့ Music ရောစပ်ထားတဲ့ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားမို့ movie ချစ်သူများအတွက်မှတ်မှတ်ရရ တင်ပေးလိုက် ပါတယ်။
2007 ခုနှစ်က ထွက်ရှိထားပြီး ကြည့်ရှုသူများအဖို့ဇာတ်လမ်းအစကနေ အဆုံးထိ music ရသကို ခံစားစေရင်းကလေးငယ်တစ်ယောက်ရဲ့ မိဘကိုမျှော်လင့်တောင့်တမှုနဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုတွေကို ခံစားမှုအပြည့်ပေး စွမ်းနိုင်တဲ့ဒရမ်မာ ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားပါ။
ဒီဇာတ်လမ်းမှာ ကလေးငယ်လေးအီဗန် ( Freddie Highmore ) ရဲ့ ဂစ်တာကို ကျွမ်းကျင်စွာတီးခတ်ပြသမှုကလည်းကျွန်တော်တို့လို music ကို ရူးသွပ်သူအဖို့ ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်းဂီတရသကို မက်မောစွာကြည့်ရှုနေမိစေတယ်။
အမှတ်မထင်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ လူးဝစ် နဲ့ လိုင်လာ တို့ရဲ့ မြင်မြင်ချင်းချစ်သွားတဲ့ အချစ် . အဲ့ဒီညမှာပဲ ချစ်တင်းနှောခဲ့မှုနဲ့ တစ်ညလေးတွေ့ခဲ့တဲ့ လူနှစ်ယောက်ရဲ့တစ်ယောက်အပေါ် တစ်ယောက် စွဲစွဲလမ်းလမ်းချစ်ခင်မှုဟာ အရမ်းကိုအံ့သြစေပြီး ကံကြမ္မာရဲ့လှည့်ပြောင်းမှုအောက်မှာပဲ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ ကြေကွဲဖွယ်ရာအချစ်ဇာတ်လမ်းဟာ
ဒီဇာတ်ကားရဲ့ ပြောင်မြောက်တဲ့ အပိုင်းထဲကတစ်ချက်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်။ရှေ့ဆက်ပြီးဇာတ်လမ်းကို မပြောပြဘဲ အခုလိုမျိုး တင်စားပြောဆိုမှုတွေဟာကြည့်ရှုသူများအဖို့ ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားမှုရှိ စေမှာဖြစ်လို့ မိမိကိုယ်တိုင်သာ ဇာတ်ကားကိုကြည့်ရှုကြပါလို့ပဲ ကျွန်တော် တိုက်တွန်းရင်း movieချစ်သူများအတွက်ဇာတ်ကားလေးတင်ပေးလိုက်ပါပြီ။